Laanta socdaalka oo hakiday xeryo qaxooti oo horey uga furtay gobolka Falun | Somaliska
Bilowgii sanadkan ayaa laanta socdaalka, waxaa ay xeryihii ugu horeeyey ee loogu talagalay in la dejiyo dadka magangalyo doonka ah ka hirgelisay gobolka Falun. Hase ahaate laanta ayaa dhawaan ka laabatay dhameeystirka qoreshe lugu balaarinayey xarrumahaasi. Waxaa ay laantu sheegtay in bisha nofeembar ee sanadkan markale la eegayo suurtagalnimadda in ay sii jirto xaruntaasi.
Talaabadan ayey walaac ku abuurtay xaqootiga halkaasi degan. Maamulka xeriyaha ayaa wuxuu dacwad u gudbiyey dowladda si looga laabto go,aan dib u dhigista ah. Go’aanka laanta socdaalka ayaa salka ku haya shirkadii asal ahaanta laheyd dhulka iyo dhismahaba ineeysan la iman cadeeymo muujineya mulkiyada dhulka iyo dhismaha oo la doonayey in laga kireeysto.
Xeryaha halkaasi laga hirgeliyey ayaa waxaa ku jira qaxooti gaaraya 150, oo u badan dumar iyo carruuro, kuwaasoo qaarkood la sheegay ineey bilaabeen xannaanadda carruurta iyo iskuulo ku yaala gobolka Falun. Laanta socdaalka ayaa lugu eedeynayaa ineeysan soo gudbin dalabka ah mulkiyada dhul ahaaneed xarruntaasi.
Walaal aan ku saxo Falun ma ahan gobol ee waa dagmo ka tirsan gobolka Dalarna